သာကေတရှိ ACE ကုမ္ပဏီ အဆောက်အအုံကို ရဲတပ်ဖွဲ့ ဆက်လက်ရှာဖွေ၊ သေနတ်နှစ်လက်၊ ဒရုန်းယာဉ်နှစ်စင်း၊ ? - Yangon Media Group
သာကေတရှိ ACE ကုမ္ပဏီ အဆောက်အအုံကို ရဲတပ်ဖွဲ့ ဆက်လက်ရှာဖွေ၊ သေနတ်နှစ်လက်၊ ဒရုန်းယာဉ်နှစ်စင်း၊ ?
အား/ကာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟောင်း၏သားဖြစ်သူ ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းနေထိုင်ခဲ့သည့် သာကေတရှိ ACE Group of Companies အားရဲတပ်ဖွဲ့မှ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်က ဆက်လက်ရှာဖွေ စစ်ဆေးရာမှ သေနတ်နှစ်လက်၊ ဒရုန်းယာဉ်နှစ်စင်းနှင့် လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသည့်အင်္ကျီနှင့် တံဆိပ်အများအပြား ထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ သေနတ်နှစ်လက်အပါအဝင် ဒရုန်းနှစ်စင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး အချို့နှင့် လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသည့်အင်္ကျီနှင့် တံဆိပ်အများအပြားကို ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းနေထိုင်ခဲ့သည့် သာကေတရှုခင်းသာ ပတ်လမ်းရှိ ACE Group of Companies ရှိ ၎င်းနေထိုင်ခဲ့သည့်အခန်းများမှ သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့် နေရာအဆောက်အအုံများကိုလည်း သတင်းရရှိမှုအပေါ်မူတည်ပြီး ဆက်လက်ရှာဖွေစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက” ဖြိုးကိုကို တင့်ဆန်း နေထိုင်တဲ့ သာကေတက ACE ကုမ္ပဏီအဆောက်အအုံ အခန်းတွေကနေ သေနတ်နှစ်လက်၊ ဒရုန်းနှစ်စင်း၊ လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းသုံးတဲ့ အင်္ကျီနဲ့တံဆိပ်တွေအပြင် စိတ်ကြွဆေးပြားအနည်းငယ်ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ သူနေထိုင်ခဲ့တဲ့အခန်းတွေကို ဟိုတယ်ကတာဝန်ရှိသူတွေမေးမြန်းပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာကနေ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာပါ”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်ကပြောကြားသည်။ ယင်းအပြင် ဖမ်းဆီးထားသူများအားစစ်ဆေးရရှိသည့်အချက်များအပေါ်မူတည်ပြီး ဆက်လက်ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတာဝန်ရှိသူက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်က နေပြည်တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် နေပြည်တော်မှ ရန်ကုန်သို့လေယာဉ်ဖြင့် သွားမည့် ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်း၊ ရဲမင်းဆွေ၊ ဇော်ဝင်းထိုက်တို့၏ခရီးဆောင်အိတ်များနှင့် ၎င်းတို့သုံးဦးနေထိုင်ခဲ့သည့် နေပြည်တော် ACE ဟိုတယ်မှ စုစုပေါင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည့် ပစ္စည်းများမှာ သြစတြေးလျနိုင်ငံနှင့်အ ခြားနိုင်ငံထုတ် ပစ္စတိုသေနတ်ကိုးလက်၊ ကျည် ၈၉၂ တောင့်၊ ကျည်အိမ် ၁၆ ခု၊ အမ် ၁၆ လက်ကိုင်ကွင်းတစ်ခု၊ ပစ္စတိုအိတ်အနက် ရောင်ခုနစ်လုံး၊ ကျည်ကာအင်္ကျီ တစ်ထည်၊ စနိုက်ပါမှန်ပြောင်းတစ်လက်၊ ကင်မရာခြောက်လုံး၊ အဝေးထိန်းဒရုန်းတစ်ခု၊ စိတ်ကြွရူးသွပ် ဆေးပြား ၁၂ ပြား၊ မန်မိုရီစတစ်မျိုးစုံ ၁၅ ခု၊ မှန်ဘီလူးတစ်ခု၊ ဆက်သွယ်ရေးစက်သုံးလုံးအပြင် လုံခြုံ ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသည့် ယူနီဖောင်းအင်္ကျီများနှင့်တံဆိပ်များ၊ ၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအချို့ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
နေပြည်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ရဲမှူးကြီးဇော်ခင်အောင်က”အခုလက်ရှိနောက်ဆုံးအခြေအနေကတော့လေဆိပ်ကဖြစ်စဉ်မှာ သေနတ်နှစ်လက်နဲ့မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းဆီးရမိလို့ မူးယစ်ဥပဒေနဲ့အ ရေးယူတယ်။ သူတို့နေတဲ့ နေပြည် တော်က ဟိုတယ်မှာလက်နက်မိ တော့ စုစုပေါင်းသေနတ်ကိုးလက် သိမ်းဆည်းရမိထားပါပြီ။ လော လောဆယ်စစ်ကြောရေးလုပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ အသေးစိတ် ပြောမရသေးပါဘူး။ လက်နက်ကိုင် ဆောင်ခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိစစ် နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိလက် နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့မှာ ပါမစ်တို့၊ ဝရမ်း တို့ထုတ်ပေးထားတာမရှိပါဘူး။တရားမဝင်လက်နက်ကိုင်ဆောင်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အတွက် လက် နက်ဥပဒေနဲ့ပါအရေးယူသွားမှာပါ”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်ကပြောကြားသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယခု ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်း၊ ရဲမင်းဆွေ၊ဇော် ဝင်းထိုက်တို့သုံးဦးကို လေဆိပ်အေလာနယ်မြေရဲစခန်းမှ မယ(ပ) ၃/ ၂ဝ၁၇၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ၁၅/ ၁၆ (ဂ)/ ၂၂(ခ) /၂၁ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေး နေပြီး လက်နက်ဥပဒေတို့ဖြင့်လည်း ဆက်လက်အမှုဖွင့်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
ဘုရားများ ခိုးထုတ်လာသော အိမ်စီးကား တစ်စီး မြင်းမူ အရာတော်လမ်းတွင် ဖမ်းမိ
‘ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက် တွေကို ပရိသတ်တွေကို ချပြချင်တာကြောင့် ရိုးသားစွာနဲ့ပဲ သီခ??
ကိုရီးယားစိုက်ပျိုး၊မွေးမြူအလုပ်အကိုင်အတွက် ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စာမေးပွဲစစ်ရန် ပြင်နေ